यी ४ राशि भएका पुरुषहरुले पाउँछन् ‘सुन्दर’ र ‘गुणवती’ श्रीमती ! – Butwal Sandesh
यी ४ राशि भएका पुरुषहरुले पाउँछन् ‘सुन्दर’ र ‘गुणवती’ श्रीमती !
यी तल प्रस्तुत गरिएको राशिका पुरुषहरुले सुन्दरसँगै गुणवती जीवनसाथी पाउने विश्वास गरिन्छ।
कर्कट राशि: शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार कर्कट राशि भएका व्यक्ति पनि भाग्यशाली मानिन्छन् । यो राशि भएका व्यक्ति धेरै दूरदर्शी हुन्छन् । यसको अतिरिक्त यो राशि भएका व्यक्ति भविश्यका लागि सजग पनि हुन्छन् । कर्कट राशिका पुरुष महिलाको चाहना बुझ्न खप्पिस हुने गर्छन्। कस्ती महिलालाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा कर्कट राशि भएका पुरुषले सजिलै बुझ्न सक्ने क्षमता राख्ने गर्छन् । साथै केटीलाई कसरी आफूप्रति आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा पनि कर्कट राशि भएका पुरुषहरु धेरै सजक हुन्छन् । यो राशि भएका धेरै व्यक्ति प्रेम विवाह (लभ म्यारिज) गर्छन् ।
मकर राशि: मकर राशि भएका पुरुष धेरै रोमान्टिक हुन्छन्। त्यसमाथि महिलाहरुले खासगरी रोमान्टिक पुरुषलाई धेरै मन पराउने गर्छन्। अर्थात् महिलाले आफ्नो पुरुष रोमान्टिक होस् भन्ने ठान्छन्। यी राशीका पुरुषहरुले आफ्नो पार्टनरलाई सरप्राइज दिने मामलामा पनि निकै अगाडी हुन्छन्। महिलालाई रि*साएको बेला हसाउन आफ्नो मुहारमा बनावटी हाँसो देखाएरै भए पनि आफ्नो खुसी पर्न सक्ने बिशेष क्षमता उनीहरु राख्दछन्। उनीहरु अचानक खुसी बनाउन पनि माहिर हुन्छन् ।